Imisebenzi Yomphakathi Yomsebenzi
Isevisi Yomhlahlandlela Wendawo
Congress, Seminar, Umhlangano, Imfundo
test Khetha Ulimi Afrikaans shqiptar عربى Azərbaycan беларускі Bosanski български 中文 Hrvatski čeština dansk Nederlands English Eesti keel Suomalainen français Deutsche Ελληνικά Hausa עברית हिंदी Magyar Indonesia italiano 日本人 Қазақша Кыргызча Latviešu Lietuviškai Македонски Malagasy Melayu मराठी Монгол хэл Norsk فارسی Polskie Português Română русский Српски slovenský Slovenščina Español svenska Türkçe український O'zbekiston tiếng việt Zulu বাঙালি ગુજરાતી ខ្មែរ 한국어 മലയാളം
Hlola Turkey nathi!
Khulula Umphefumulo Wakho!
I-zelve Travel Agency
ukuhlangenwe nakho kweminyaka engu-42!
Intengo engcono kakhulu!
Ingabe udinga isevisi opharetha lwendawo e-Turkey? Sisehlangothini lwakho nezinsizakalo zethu zendawo zengcweti.Ukuze uthole ulwazi oluthe xaxa mayelana nekhwalithi yethu, izinsizakalo zomsebenzi, zendawo zomnotho, sicela uxhumane nathi..
Uhambo lwephakheji oluyingqayizivele
Experience ayedingeka ekudaleni uhlelo izinga eTurkey! Ukucabangela izimo zezimoto, ukuthatha izinyathelo ezindaweni ezikhangayo nokukhetha izindawo zokudlela ezinhle.Masizise nje okulindelekile futhi ushiye konke okunye kithi!.
Hlola Turkey nge Abaqondisi bethu abaqeqeshiwe abakhuluma ngolimi lwakho! Unolwazi mayelana nezindawo zomzila wakho wohambo, izindaba ngolimi lwakho..
Isevisi Yokuthuthukiswa Komsebenzi
Siyakwamukela nganoma isiphi isikhathi kusuka noma yikuphi ngezimoto zethu ezizimele ezizimele.Sishiya ngokuqiniseka iphuzu ofuna ukuya ngalo.Sicela uxhumane yokudlulisa yakho idinga e-Turkey.
Ibhasi, I-minibus Hire
Sisebenzela ngezimoto ezintsha, ezinomoya.
Ihhotela, I-villa, I-holiday Village
Ngokwezidingo zakho zokuhlala, izindlu zangasese zangasese, amahhotela okunethezeka, amahhotela eqembu, amaholide ezinjabulo njll okwenza ukubhuka kwamahhotela akho.
Imyuziyamu, umcimbi, amathikithi.Ibhasi lasekhaya, indiza, amathikithi okuqeqesha.
Ukuhlangana, Ukuvuselela, Congress, Indawo
Ukuhlangana, ukugqugquzela, inhlangano kanye nezinhlangano zezemicimbi zenza.
Zelve.com.tr Iwebhusayithi esemthethweni ye-TURSAB.
Ungahlola imininingwane yokubhalisa ngokuchofoza esithombeni ngezansi.
Ikheli: Kuşdili cd Efes İş Hanı no:12 d:143-144 Kadıköy İstanbul Türkiye
Ifoni: +90 216 346 9030 pbx
Ifekisi: +90 216 349 9051
Imikhankaso &amp; Izimemezelo
Ungabhalisela kuhlu lwethu ukuthola i-imeyili ehlobene nezinkambo zethu, izihloko kanye nezimemezelo.